Biyo yari xoolo-dhaqatada ku haysata Bakool
Photo | Ceelka xoolaha laga waraabinayo ee Garasweyne/Xusni/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 12 January, 2016 BAKOOL
(ERGO) - Waa duhur ay qorraxdu aad u kulushahay. Labo ceel oo ku yaalla deegaanka Garasweyne ee gobolka Bakool waxaa ku kulansan in ka badan kun neef oo isugu jira geel, lo’, ari iyo dameero. Xoolaha oo qeyb laga leeyahay deegaanka, qeybta kalena laga keenay degmooyinka iyo deegaannada kale ee gobolka waxay halkan u joogaan inay biyo ka cabaan.
Aamina Maxamed Xuseen waxay muddo afar maalin ah u soo lugeynaysay Garasweyne oo 20 km u jira tuulada ay deggan tahay ee Abaad-dheer ee gobolka Bakool. Waxay wadataa boqol neef oo ari ah oo ooman oo ay dooneyso inay waraabiso. “Ceelka deegaankan waa kan ugu dhow oo aan waraab uga heli karo xoolahayga,” ayay tiri Aamina. Laakiin 48 saac in ku dhow ayay saf ugu jirtaa ceelka oo xoolo dhaqatadu ay ku kalleytamayaan. Weli ma hubto goorta uu biyaha cabi doono arigeeda oo maalintii lixaad ooman. Waxay tiri “Sababta halkan mashquulka ka dhigtay waa biyo yarida jirta.”
Ceelka waxaa biyaha looga soo saaraa wadaan, kaddibna dar ayaa xoolaha loogu shubaa si ay uga cabaan. Aamina waa hooyo keligeed korisa 4 carruur ah oo ay dhashay, balse haddii ay fursadda u saamaxdo in ay ceelka xoolaha ka waraabsato waxay ku khasbanaan doontaa inay keligeed isku duwato, oo biyaha ay ceelka ka soo saarto ay u dhaamiso arigeeda.
Biyo yarida aadka u saameysay xoolo-dhaqatada ayaa ka dhalatay roob fiican oo sanadihii la soo dhaafay aan ka da’in gobolka Bakool iyo ceelal badan oo guray, iyadoo tuulooyinka qaar aanay ceelal lahayn. Hadda waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo kuleyl daran uu jiro, dhulkuna uu aad u qallalan yahay.
“Biyo la’aan xun ayaa jirta. Ceelkan aad u jeeddo mararka qaar wuxuu guraa annagoo saf ugu jirna,” ayuu yiri Cali Isxaaq Nuur oo sugaya inuu waraabiyo 60 neef oo geel ah oo uu ka soo arooriyay deegaanka Ceel-barde oo 25 km u jira Garasweyne. Haddii uu ceelka guro waxay xoolo-dhaqatadu ku khasbanaadaan inay sugaan inta uu ka soo maaxanayo ugu yaraan 24 saac.
Dadka ku nool gobolka Bakool waxay u badan yihiin xoolo-dhaqato, waxayna hadba u hayaamaan meeshii war-biyood ama ceel lagu sheego.
Biyo yari xoolo-dhaqatada ku haysata Bakool" data-width="100%" data-numposts="5" data-colorscheme="dark">